Free Thinker: မီးလောင်မှုတွေကို ဘယ်လိုလျှော့ချမလဲ
ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြင့် ဤစာကိုရေးပါသည်။
ကျွန်တော် အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမှာ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွင် မီးလောင်သည့်သတင်းများ မကြာခဏ ကြားနေရ၍ ဖြစ်၏။ မုန်တိုင်းတိုက်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း စသည်တို့မှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်သဖြင့် ပြုပြင်ရန်၊ တားဆီးရန် မလွယ်ကူလှပါ။ သို့သော် မီးလောင်ခြင်းမှာမူ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်မဟုတ်။ လူ့ပယောဂကြောင့် ဖြစ်၏။ မီးလောင်၍ ပျက်စီးဆုံးရှုံးရသောတန်ဖိုးမှာ တစ်နှစ်တစ်နှစ် မနည်းလှပါ။ လူအသေအပျောက်လည်းရှိ၏။ မဆုံးရှုံးသင့်ပဲ ဆုံးရှုံးရသော ဥစ္စာများဖြစ်၍ အလွန်နှမြောစရာကောင်းပါသည်။ နိုင်ငံတော်အနေနှင့်လည်း ဆုံးရှုံးမှုတန်ဘိုးကြီးလှသည်။
ဤမီးများမှာ လူများ၏ ပေါ့ဆမှု၊ အသိပညာအားနည်းမှု၊ စည်းကမ်းမလိုက်နာမှု နှင့် အရေးကြီးဆုံးကား “စီမံခန့်ခွဲခြင်း အားနည်းမှု နှင့် စနစ်” တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ယခု မြန်မာနိုင်ငံတွင် လောင်ခဲ့သော မီးများအကြောင်း အနည်းငယ် စေ့ငုကြည့်ပါမည်။
၂။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်းက မီးလောင်မှု ၇၁၉ ခု ရှိခဲ့ပြီး မီးလောင်မှုကြောင့် ၂၈ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်ဟု အစိုးရ ထုတ်ပြန်ချက် များကို ကိုးကားပြီး ရိုက်တာသတင်းက ဖော်ပြခဲ့သည်။
၃။ ၂၀၀၉ ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၌ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အမျိုးသမီးငယ်တဦး အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ မီးလောင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ ဖယောင်းတိုင်မီးကြောင့်ဖြစ်ပြီး အိမ်ခြေ ၄၀ မီးထဲပါသွား ခဲ့သည်။
၄။ ၂၀၁၀ မတ်လ ၁ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ လသာရှိ သိမ်ကြီးဈေး D ရုံတွင် မီးလောင်ခဲ့သည်။ ပထမထပ်ရှိ စားသောက်ဆိုင် တန်းများမှ စတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။
၅။ ၂၀၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့ ညသန်းခေါင်ကျော်တွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ လိုင်ဇာမြို့ ဈေးကြီး၌ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဆိုင်ခန်းအားလုံး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။ မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ငွေပမာဏ သိန်း ၃၀,၀၀၀ ကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
၆။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ မြန်မာပြည်၌ မီးလောင်မှု ၆၈၄ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လျှပ်စစ်ကြောင့် မီးလောင်မှု ၇၅ ကြိမ် ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထိုသတင်းတွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်မှာ လျှပ်စစ်ကြောင့် မီးလောင်မှုများတွင် အများစုမှာ ၀ါယာရှော့ဖြစ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား မြင့်တက်ခြင်း၊ ချို့ယွင်းပျက်စီးနေသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများသုံးခြင်း၊ မီးအားထိန်းကိရိယာ Safe Guard ပျက်စီးချို့ယွင်းခြင်း၊ ချို့ယွင်းပျက်စီးနေသည့် ၀ါယာကြိုး ဟောင်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကြောင့် လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
၇။ ၂၀၁၁ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ်မြို့ ၆ ရပ်ကွက်ရှိဆိုင်အမှတ် (၁ဝ/က) စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်တွင် ဓာတ်ဆီတိုင်ကီအား ဂေါက်တံဖြင့် ရိုက်ဖွင့်ရာမှ မီးစထွက်ကာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုနေ့မှာပင် မန္တလေးတိုင်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ ဟေမာဇလရပ်ကွက်၊ ၂၉ လမ်းနှင့် ၇၆ x ၇၇ လမ်းကြားရှိ လမ်းဘေး စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်တွင် ပလတ်စတစ်ပုံးထဲထည့်ထားသော ဓာတ်ဆီအား ရေသန့်ဘူးထဲပြောင်းထည့်ရာမှ တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်ကြောင့် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
၁၄။ ၂၀၁၁ ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့က မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၁ ရပ်ကွက် ၊ဘုရင့်နောင် ကားပစ္စည်းဈေးကြီးတွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဈေးရုံ(စ)၊ ဆိုင်အမှတ် (၃၄/၃၅)ကြားရှိ ဘရိတ်ကာ အပူလွန်ကဲရာမှတစ်ဆင့် စတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
၁၉။ ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်နေ့ ည ၁၂နာရီကျော်အချိန်၌ ဝါယာရှောခ့်ဖြစ်ကာ ရန်ကုန်၊ ဂွတ္တလစ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေး စက်ရုံ၌ မီးလောင်မှုဖြစ်ပြီး ငွေကျပ်သိန်း ၉ဝ ကျော်ဖိုး ဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
၂၂။ ၂၀၁၀ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့ မုံရွာမြို့၊ ချင်းတွင်းရတနာဈေး မီးကြောင့် ဆိုင်ခန်း ၄၀၆ ခန်း မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သည်။
၂၆။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မီးသတ်အင်အား ၃၀၀၀ ကျော်၊ မီးသတ်ယာဉ် ၁၅၄၅ စီး၊ မီးသတ်စခန်း ၃၉၄ ခု ရှိသည်ဟု ဆို၏။ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် ဤအင်အားမှာ အလွန်နည်းလှသည် ထင်ပါသည်။
၂၇။ ယခုနောက်ဆုံး ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက်ဘေး၊ မေတ္တာမွန် ၀င်းအတွင်းရှိ ပစ္စည်းဂိုဒေါင်ရုံအချို့တွင် မီးလောင်မှုနှင့်ပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွားသောကြောင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၆ ဦး အပါအ၀င် သေဆုံးသူ ၁၇ ဦး၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃၇ ဦးအပါအ၀င် ဒါဏ်ရာရသူ ၉၁ ဦးဟု ဆိုပါသည်။ သို့သော် ထိုဦးရေမှာ တိုးလာ နိုင်ဖွယ်ရှိပါသေးသည်။ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ကုန်လှောင်ရုံ ၁၆ လုံး၊ အိမ်ခြေ ၂၂၆ လုံး၊ မီးသတ်ယာဉ် ၂ စီး၊ ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး ငွေကျပ် သိန်းတစ်ထောင်ကျော် ဟုသိရပါသည်။
ဤသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာပြည်၌ တစ်နှစ်လျှင် မီးလောင်မှုကြောင့် လူအသေအပျောက် မည်မျှရှိသည်၊ ပစ္စည်း ဥစ္စာများ မည်မျှဆုံးရှုံးနေရသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤအရာအားလုံးမှာ လူ့ပယောဂကြောင့် အလဟဿ ဆုံးရှုံး သွားရခြင်းဖြစ်၏။
ကျွန်တော်သည် လက်ရှိတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ Workplace Safety and Health Officer, Environmental Control Officer ရာထူးဖြင့် လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်၏။ တစ်ဖက်၌လည်း မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတို့အကျိုးငှာ အင်ဂျင်နီယာနှင့် အခြား သိသင့် သိထိုက်သည့် ဗဟုသုတရစရာ စာအုပ်များကို တစ်အုပ်ပြီးတစ်အုပ် မနားတမ်းရေးသား ထုတ်ဝေလျှက်ရှိပါသည်။
ယခုနောက်ဆုံးထုတ်ဝေရန် ပြင်ဆင်နေသောစာအုပ်မှာ “အရေးပေါ်လက်စွဲ” ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစာအုပ်တွင် မီးအဘယ်ကြောင့် လောင်သနည်း။ မီးမလောင်ရန် မည်သည်တို့သတိထားရမည်နည်း။ မီးမလောင်စေရန် မည်သည်တို့ကာကွယ်မှု ပြုလုပ်ထားရ မည်နည်း။ မီးလောင်လာလျှင် မည်သို့လုပ်မည်နည်း စသည်တို့ကို ပြည့်စုံနိုင်သမျှ ပြည့်စုံအောင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့အပြင် မုန်တိုင်းတိုက်လျှင်၊ ရေကြီးလျှင် စသဖြင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကျရောက်လာပါက မည်ကဲ့သို့ လုပ်ရမည်။ မည်ကဲ့သို့ ပြင်ဆင်ထားရမည်။ ဒါဏ်ရာအနာတရဖြစ်လျှင် မည်ကဲ့သို့ ပြုစုရမည် စသဖြင့် အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် လုပ်ရမည့် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များကို စုဆောင်းပြုစုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤစာအုပ်မှာ စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် ထုတ်ခြင်းမဟုတ်။ ကျွန်တော် ရမည့်စာမူခကို ပိုက်ဆံအစား စာအုပ်များ ပြန်ယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ စာကြည့်တိုက်များသို့ လှူပါမည်။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းသူပြည်သားများအနေနှင့် ဤကဲ့သို့သော ဗဟုသုတများ မရှိသေးပါ။ အသိပညာမရှိ၍လည်း မသေသင့်ပဲ သေကြရသည်။ မဆုံးရှုံးသင့်ဘဲ ဆုံးရှုံးကြရသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်သား လူအများတို့ အသိပညာ ဗဟုသုတရစေခြင်း အလို့ငှာရည်ရွယ်၍ ဤစာအုပ်ကို ထုတ်ပါသည်။
နောင်တွင်လည်း ကျွန်တော့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတများကို အခြေခံကာ မြန်မာနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက် လိုအပ်မည့် စာအုပ်များကို ဆက်လက်ပြုစုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ယခုပြောလိုသည်မှာ ဤစာအုပ်အကြောင်း မဟုတ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ဖြစ်ပျက်နေသော အခြေအနေများကို အနည်းငယ် သုံးသပ်ပြလို၍ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော့်အလုပ်အကိုင်ကို ဖော်ပြရခြင်းမှာ အောက်ပါရေးသားထားချက်များသည် ကျွန်တော့်စိတ်ကူးနှင့် ထင်ရာ လျှောက်ပြောခြင်း မဟုတ်။ ကျွန်တော့်အလုပ်နှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေသော အသိပညာ၊ ဗဟုသုတများကို မှီငြမ်း ကိုးကားပြီး ရေးသားထားကြောင်း သိစေလို၍ ဖြစ်ပါသည်။
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက်မှ ဂိုဒေါင်များ မီးလောင်ပေါက်ကွဲသောအခါ ဂိုဒေါင်ပိုင်ရှင်များကို အရေးယူမည် ဟု ဆိုပါသည်။ ယခင်ကလည်း ဤကဲ့သို့ပင် မီးလောင်သောအခါ မီးစတင်လောင်သည့် အိမ်၊ သို့မဟုတ် အဆောက်အအုံ ပိုင်ရှင် စသူတို့ကို အရေးယူခဲ့ဖူးပါပြီ။ သို့ဆိုလျှင် ဤကဲ့သို့ မီးလောင်သည့်အိမ်ရှင်ကို အရေးယူရုံမျှဖြင့် မီးလောင်မှုကို လျှော့ချ သွားနိုင်ပါမည်လား ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်ပါသည်။
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မှ ဂိုဒေါင်များ မီးလောင်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့်လောင်ခြင်း ဖြစ်သနည်း။ ယခုထိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိသေးပါ။ အကယ်၍ ၀ါယာရှော့ဖြစ်ရာမှ လောင်သည်ဆိုပါစို့။ အဘယ်ကြောင့် ၀ါယာရှော့ဖြစ်ရသနည်း။ ရှင်းပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးကြိုးများကို စနစ်တကျသွယ်တန်း မထား၍။ ရှော့ဖြစ်သည့်အခါ မီးမလောင်ရန် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ လုပ်မထား၍ ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် မေလက မင်္ဂလာဈေးမီးလောင်ခြင်းသည် ရေနွေးအိုးတည်ထားရာမှ မီးပြတ်သွားရာ ခလုတ်မပိတ်မိခဲ့၍ မီးပြန်လာသောအခါ အပူလွန်၊ ၀ါယာရှော့ဖြစ်ပြီး လောင်ရသည်ဟု သတင်းများတွင် ဖတ်ရပါသည်။ ဤသတင်းကို ဖတ်မိသောအခါ ကျွန်တော် အလွန်အံ့သြမိပါ၏။ အပူလွန်ပြီး ရှော့ဖြစ်လျှင် ဘရိတ်ကာ(breaker) ကျရပါမည်။ သို့မဟုတ် ဖျူ့စ် (fuse) ပြတ်ရပါမည်။ ထိုအခါ မီးလောင်ရန် ဘာအကြောင်းမှ မရှိပါ။ ယခု ရှော့ဖြစ်သဖြင့် မီးလောင်သည်ဆိုတော့ လျှပ်စစ်ဝါယာလိုင်းများကို မည်သည့်စနစ်နှင့်မျှ ကာကွယ်မထားကြောင်း ထင်ရှားလှပါသည်။
ဤသည်မှာ မင်္ဂလာဈေးတစ်ခုထဲမဟုတ်ပါ။ အထက်တွင် ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့သော မြန်မာပြည် မီးသတင်းများကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ တော်တော်များများမှာ ၀ါယာရှော့ကြောင့်လောင်ခြင်းဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ သို့ဆိုလျှင် မြန်မာပြည်ရှိ အဆောက်အအုံများ မှ မီးပေးသည့်စနစ်တွင် ဘာအကာအကွယ်မှ လုပ်မထားသည်မှာ သေချာလှပါသည်။
ဤသို့ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ရာ၌ လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများ သွယ်တန်းသည့် အခါ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ စံချိန်စံညွန်းများ ရှိပါသလား။ အကယ်၍ ရှိခဲ့သည်ဆိုလျှင် ဆောက်လုပ်ရေး ကန်ထရိုက်တာများသည် ထို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ စံချိန်စံညွန်းများကို လိုက်နာပါသလား။ ဤဆောက်လုပ်ရေး စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း၊ စံချိန်စံညွန်းများကို လိုက်လံစစ်ဆေးမည့်သူများ ရှိပါသလား။ အကယ်၍ ရှိသည့်တိုင် ဤစစ်ဆေးရေး အရာရှိများ သည် မှန်မှန်ကန်ကန် စစ်ဆေးပါသလား။
အားမနာတမ်းပြောရလျှင် ကျွန်တော်ကတော့ ဤစနစ်များရှိမည် မထင်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ရာ၌ လိုက်နာရန်ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ စံချိန်စံညွန်းများရှိမရှိကို ကျွန်တော်မသိပါ။ ရှိသည့်တိုင် အနှီကန်ထရိုက်တာများသည် လိုက်နာလိမ့်မည် ဟု ကျွန်တော်မယုံကြည်ပါ။ လိုက်လံစစ်ဆေးမည့်သူများ ရှိသည်ဆိုလျှင်ပင် ထိုသူများသည် သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွန်းများအတိုင်း ရှိမရှိ သေချာဂဏ စစ်ဆေးပါသလားဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများအနေနှင့် ပြန်လည် ဆန်းစစ်ရန် အချိန်ကျရောက်နေပါပြီ။
ထို့ပြင် မည်သည့်အဆောက်အအုံဆိုလျှင် မည်ကဲ့သို့သော မီးကြိုးများသွယ်တန်းရမည်။ မသွယ်တန်းလျှင် ငွေဒါဏ် သို့မဟုတ် ထောင်ဒါဏ်မည်မျှချမည်ဆိုသည်ကို ပြဌာန်းထားသည့် ဥပဒေ ရှိပါသလား။ ကျွန်တော်မသိပါ။ စင်ကာပူတွင်တော့ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ရေးမှာသာမက အရာရာတိုင်းကို ဥပဒေဖြင့် ပြဌာန်းထားပါသည်။ ဤဥပဒေကို လိုက်နာ၊ မလိုက်နာလည်း သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ လိုက်လံစစ်ဆေးပါသည်။ ဥပမာ - BCA (Building Construction Authority), NEA (National Environment Agency), PUB (Public Utility Board) စသည်တို့ ဖြစ်၏။ မလိုက်နာသူများကိုလည်း သတ်မှတ်ထားသော ပြစ်ဒါဏ်များအတိုင်း အပြစ်ပေး၊ အရေးယူပါသည်။
အထက်ပါမီးလောင်ခဲ့သည့် ဂိုဒေါင်တွင် လျှပ်စစ်စနစ် သေသေချာချာ တပ်ဆင်မထားတာ သေချာသလောက် ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က တပ်ဆင်ထားသည်ဆိုလျှင်ပင် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းရှိမရှိ၊ လက်ရှိသုံးနေသည့် လျှပ်စစ်စနစ်သည် စိတ်ချလက်ချ ဆက်လက်သုံးလို့ရ၊ မရဆိုတာ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းက တာဝန်ယူ စစ်ဆေးပါသနည်း။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍သာ ဤဂိုဒေါင်များသည် ၀ါယာရှော့ကြောင့် မီးလောင်ရပါသည်ဆိုလျှင် ဂိုဒေါင်ပိုင်ရှင်ကို အရေးယူရမည့်အစား လျှပ်စစ်ဌာန သို့မဟုတ် ဤမီးကြိုးများကို သွယ်တန်းခဲ့သော ကန်ထရိုက်တာကိုသာ အရေးယူရန်ရှိပါသည်။
အကယ်၍ ထိုဂိုဒေါင်များသည် သိုလှောင်ထားသော ဓါတုပစ္စည်းများ ဓါတ်မတည့်ရာမှ မီးလောင်ပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်သည် ဆိုအံ့။ မည်သည့်ဓါတုပစ္စည်းကို မည်သည့်ဓါတုပစ္စည်းနှင့် တွဲမထားရ။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အနည်းဆုံး မီတာမည်မျှကွာရမည်။ ထိုပစ္စည်းများ သိုလှောင်ထားသည့် နေရာသို့ နေရောင်တိုက်ရိုက်မကျရ၊ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းရမည်၊ ဘယ်နှပေ အကွာတွင် မီးသတ်ဗူးတစ်ခုထားရမည်။ မည်ကဲ့သို့သော မီးကာကွယ်ရေးစနစ်များ တပ်ဆင်ထားရမည် ဆိုတာ ဥပဒေ၊ စည်းကမ်း၊ နည်းလမ်းများ ရှိပါသလား။ ရှိသည်ဆိုလျှင်ပင် ဤကဲ့သို့ ပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ က သွားရောက် စစ်ဆေးပါသလား။ ဤကဲ့သို့ စစ်ဆေးရန် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့ထားပါသလား။ ဤအဖွဲ့အစည်းများအား လုပ်ပိုင်ခွင့် မည်မျှပေးထားပါသနည်း။ ဤအဖွဲ့တွင် ပါဝင်နေသူများအနေနှင့် မိမိတာဝန်ကို လာဘ်မစားဘဲ မည်မျှ မှန်မှန်ကန်ကန် ထမ်းဆောင်ပါသနည်း အစရှိသည်တို့မှာ မေးခွန်းထုတ်စရာများ ဖြစ်ပါသည်။
ကုန်သည်ဟူသည် ပညာတတ်ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မည်။ ပညာတတ်သည် ဆိုစေ၊ မည်သည့်ဓါတုပစ္စည်းကို မည်သည့်ပစ္စည်းနှင့် တွဲမထားသင့် ဆိုသည်ကို သိပါသလား။ ဤသည်မှာ အစိုးရက ဥပဒေဖြင့် ထုတ်ပြန်ပြဌာန်းထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေ ရှိလျှက်နှင့်မှ မလိုက်နာလျှင်တော့ မလိုက်နာသူများကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေမရှိဘဲ မည်ကဲ့သို့ လိုက်နာပါမည်နည်း။ ဤပစ္စည်းကို ထိုပစ္စည်းနှင့် တွဲမထားသင့်ကြောင်း မည်ကဲ့သို့ သိနိုင်ပါမည်နည်း။ အနှီပစ္စည်းများကို မည်ကဲ့သို့ သိုလှောင်ရမည်ဆိုသည့် အသိပညာ ဤကုန်သည်များတွင် ရှိပါ၏လော။ ဤသည်မှာ အစိုးရ၏ အလုပ်ဖြစ်၏။ ဤကဲ့သို့သာ မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ကြမည်ဆိုလျှင် ဤမီးလောင်မှုများကို အတော်များများ လျှော့ချနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဓါတုပစ္စည်းများ သိုလှောင်ရာတွင်ပင် မဟုတ်ပါ။ မီးလောင်နိုင်သည့် ပစ္စည်းများနှင့် ပြည့်နှက်နေသော မင်္ဂလာဈေးကဲ့သို့ ဈေးများတွင်ရော။ မည်သည့်ပစ္စည်းများကို မည်သည့်နေရာတွင် ထားရမည်။ မည်သည့်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချလိုလျှင် ဈေးအတွင်း၌ အရေအတွက်မည်မျှသာ ထားခွင့်ပြုသည်။ မည်သည့်ပစ္စည်းများ ရောင်းသူသည် မီးသတ်ဗူးဆောင်ထားရမည်။ မီးအရေးပေါ် အခြေအနေများတွင် အရေးပေါ်ကာကွယ်ရေးစနစ် မည်ကဲ့သို့ စီမံထားရမည် စသည်တို့ ပြဌာန်း ထားပါသလား။ ဈေးကြီးများအတွက် မည်ကဲ့သို့သော မီးကာကွယ်ရေး စနစ်များ တပ်ဆင်ထားပါသနည်း။ မီးတကယ်လောင်သည့်အခါ မည်ကဲ့သို့ တုံ့ပြန်ကြမည်ကို ကြိုတင်ဇာတ်တိုက်ထားခြင်း (Fire drill) မျိုးရော ရှိပါသလား။
မီးလောင်တော့မှ မီးသတ်ကားနှင့် သွားသတ်တာက ဒုတိယ ဖြစ်ပါသည်။ ပထမအရေးတကြီးဆောင်ရွက်ရမည်မှာကား မီးကာကွယ်ရေးစနစ်များ ဖြစ်ပါ၏။ မီးလောင်ရာကို မီးသတ်ကားနှင့်သွားသတ်နိုင်သည်ဆိုစေ။ မီးမှာ လောင်နှင့်ပြီဖြစ်သဖြင့် အနည်းနှင့် အများဆုံးရှုံးရမည်ဖြစ်ပါ၏။ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက် ပိုမကောင်းပါသလော။
အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများဘက်က ဘာတစ်ခုမှ ပံ့ပိုးမပေးပါဘဲလျှက် မီးလောင်တိုင်း မီးတရားခံကို အပြစ်ပေး၊ အရေးယူ နေသည်မှာ တစ်ခြမ်းသာ မှန်ပါသည်။ ကျန်တစ်ခြမ်းမှာ မတရားပါ။ ထမင်းအိုးတည်ရင်း မီးလောင်လျှင်တော့ ထိုသူကို ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူရပါမည်။ သို့သော် ၀ါယာရှော့ကြောင့် မီးလောင်ခြင်းကိုမူ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများ ၀န်ဆောင်မှု ပေးနေသော ဌာနကသာ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးသင့်ပါသည်။ အိမ်ရှင်၏ အပြစ်ချည်းမဟုတ်ပါ။
နောက်တစ်ခုမှာ မီးကာကွယ်ရေးစနစ် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မည်သည့်အဆောက်အအုံတွင် မီးကာကွယ်ရေးစနစ်များ တပ်ဆင်ထားပါသနည်း။ မည်သည့်အဆောက်အအုံ တွင်မှ မရှိပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ရပ်ကွက်၊ မြို့ရွာများတွင် မည်ကဲ့သို့သော မီးကာကွယ်ရေးစနစ်များ တပ်ဆင်ပေးထားပါသနည်း။ မည်သည့် မီးကာကွယ်ရေးစနစ်မှ မရှိပါ။ ယုတ်စွအဆုံး တကယ်အသုံးတည့်သည့် အရံမီးသတ်ပင် ကျကျနနမရှိပါ။ ယခုရှိနေနိုင်သည့် အရံမီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုရော မည်မျှလေ့ကျင့်ပေးထားပါသနည်း။ သူတို့တွင် မီးကာကွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ဗဟုသုတ မည်မျှရှိပါသနည်း။ မီးကာကွယ်ရေး ဗဟုသုတသာမက အရေးဟေ့ဆိုလျှင် ကောက်သုံးနိုင်မည့် မီးသတ်ပစ္စည်း မည်မျှ ထောက်ပံ့ပေးထားပါသနည်း။ ထိုအရံမီးသတ်များကလည်း မီးဟေ့ဆိုလျှင် အရံသင့်ဖြစ်နေအောင် မည်မျှလေ့ကျင့် ထားပါသနည်း။ လုပ်သားပြည်သူများအားလည်း မီးနှင့်ပတ်သက်သော ပညာပေးဟောပြောပွဲများ လုပ်ပေးပါသလား။ လုပ်ပေးသည်ဆိုလျှင် မည်မျှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ပေးပါသနည်း။ မိမိတို့လုပ်တာ တကယ်ထိရောက်၊ မထိရောက် ပြန်လည် ဆန်းစစ်ပါသလား။
သတင်းများအရ ယခု နောက်ဆောက်ထားသော ဈေးကြီးများတွင် မီးကာကွယ်ရေးစနစ်များ ပါသည်ဟုဆိုပါသည်။ မည်သည့် standard များနှင့်ဆောက်လုပ်ထားသည်ကို ကျွန်တော်မသိပါ။ မီးကာကွယ်ရေးစနစ်တော့ တပ်ထားပါရဲ့။ တကယ်ရော အလုပ်လုပ်ရဲ့လား ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်ပါသည်။ မီးကာကွယ်ရေးစနစ် တပ်ဆင်ပြီးတော့ Test run သို့မဟုတ် commissioning ရော လုပ်ပါသလား။ အမြဲ ပုံမှန် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်နေပါသလား။ မီးဟေ့ဆိုလျှင် အချိန်မရွေးဖွင့်နိုင်အောင် ဤစနစ်သည် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါသလား။ ဤစနစ်ကို ကိုင်တွယ်မည့် တာဝန်ခံ ခန့်ထားပါသလား။ ဤတာဝန်ခံသည် ဤမီးကာကွယ်ရေးစနစ်အကြောင်း ဂဃနဏ သိပါသလား။ ဤသည်တို့ကို ကျွန်တော်မသိပါ။ တာဝန်ရှိသူများအနေနှင့် လေ့လာဆန်းစစ်ကာ အရေးတယူဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကတော့ နာမည်ခံမျှ မဟုတ်ဘဲ တကယ်အလုပ်ဖြစ်မည့် စနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ စင်ကာပူတွင်တော့ ဤကဲ့သို့သော ဈေးကြီးများတွင် Fire Safety Manager ကို ဥပဒေအရ ခန့်ထားရပါသည်။ Fire Safety Manager ၏ တာဝန်နှင့် ၀တ္တရားများကိုလည်း အတိအကျ ပြဌာန်းထားပါသည်။ မီးနှင့်ပတ်သက်လျှင် သူ့တွင်တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်၏။ မြန်မာပြည်မှ ဈေးကြီးများတွင် မီးဟေ့ဆိုလျှင် မည်သူသည် တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်ပါမည်နည်း။
နောက်တစ်ခုမှာ မီးကာကွယ်ရေး ပညာပေးဖြစ်၏။
မြန်မာပြည်သားလူအများတွင်ရော မီးနှင့်ပတ်သက်သည့် အသိပညာ မည်မျှရှိပါသနည်း။ ဘာအသိပညာမှမရှိပါဟု ကျွန်တော် ဆိုလျှင် လွန်မည်မထင်ပါ။ အရပ်သူအရပ်သားများကို ပညာပေးရန် ခက်သည်ဆိုအံ့။ စာသင်ကျောင်းများတွင် မီးကာကွယ်ရေး သင်တန်းများ အဘယ်ကြောင့် မလုပ်ပေးနိုင်ပါသနည်း။ အနည်းဆုံး ကျောင်းပိတ်ရက်၊ နွေရာသီသင်တန်းများ ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်က နွေကျောင်းပိတ်ရက်များတွင် ဆရာ၊ ဆရာမများက ပန်းချီသင်တန်း၊ ဂီတသင်တန်း၊ အားကစား သင်တန်း စသည်တို့ လုပ်ပေးပါသည်။ ယခုလည်း အရေးကြီးသော မီးကာကွယ်ရေးသင်တန်းများကို ကျောင်းများတွင် နွေရာသီသင်တန်းတစ်ခုအဖြစ် လုပ်မပေးသင့်ပါသလော။ မီးသတ်ဦးစီးဌာနနှင့် ကျောင်းများပူးပေါင်းကာ အထူးလုပ်သင့် ပါသည်။ မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းမှ ကျောင်းအားလုံး ဂရုစိုက်ပြီး လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြပါဟု အလေးအနက်တိုက်တွန်းပါသည်။
ကျောင်းသားငယ်များကို အပျော်ထမ်း မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့ပေးထားလျှင် သူတို့ကျောင်းမှ ထွက်သွားသည့်အခါ အားကိုးအားထား ပြုရမည့် အရံမီးသတ်များ ဖြစ်မလာပါသလော။
ရပ်ရွာများအတွင်း၌လည်း မီးအသိပညာပေး ဟောပြောပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်း၊ မီးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လက်ကမ်းစာ စောင်များ ရိုက်နှိပ်ဖြန့်ဝေခြင်း၊ အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းတွင် မီးသတ်ဗူးများ ဆောင်ထားရန် နှိုးဆြော်ခင်း၊ မီးသတ်ဗူးအသုံးပြုနည်း သရုပ်ပြခြင်း၊ မီးသတ်ဗူးများကို သက်သာမည့်ဈေးနှုံးတစ်ခုဖြင့် ရောင်းချပေးခြင်း၊ မီးသတ်ဗူးရှိသည့်အိမ်များအားလည်း မီးသတ်ဗူးများ လိုက်လံစစ်ဆေးပေးသည့် ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်း စသည်တို့ ပြုလုပ်ပေးလျှင် မီးလောင်မှု အတော်များများကို လျှော့ချနိုင်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော် အလေးအနက် ယုံကြည်ပါသည်။
မီးဟူသည် ရေတစ်မျိုးတည်ဖြင့်သတ်၍ ရစကောင်းသော အရာမဟုတ်။ မီးအမျိုးအစား ၅ မျိုး ရှိသည့်အနက် မီးတစ်မျိုးကိုသာ ရေဖြင့် သေသေချာချာ သတ်နိုင်သည်။ အခြားတစ်မျိုးကိုမူ ရေဖြင့် ငြိမ်းသတ်နိုင်သည့်တိုင် သေသေချာချာ၊ နိုင်နိုင်နင်းနင်း မသတ်နိုင်၊ ကျန် မီးအမျိုးအစား ၃ မျိုးကိုမူ ရေဖြင့်လုံးဝငြိမ်းသတ်၍ မရဆိုသည်ကို သိသူ ဘယ်နှယောက်ရှိပါသနည်း။
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မီးတွင် မီးသတ်ရဲဘော်များ ကျဆုံးသွားသည်ကို ကြားရသောအခါ ကျွန်တော် ကိုယ့်ညီအစ်ကိုများ ဆုံးပါးသွားရသကဲ့သို့ပင် ၀မ်းနည်းမိ၊ မျက်ရည်လည်မိပါသည်။ သူတို့တွင် လုံလောက်သော မီးသတ်သည့်အသိပညာ ရှိပါသလား။ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကို စိတ်ချလက်ချကာကွယ်ပေးမည့် မီးသတ်ဝတ်စုံများ ပံ့ပိုးပေးထားပါသလား။ မီးသတ်လျှင် မိမိကိုယ်တိုင်၏ အန္တရာယ်ကို မည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကို ထိုရဲဘော်များ သေသေချာချာ သိပါသလား။ မီးသတ်ရင်း ထိခိုက်မှု များအတွက် ထိခိုက်မှုအာမခံ၊ ယခုကဲ့သို့ ဆုံးပါးသွားရခြင်းအတွက် အသက်အာမခံများ ထားပေးပါသလား။ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုများအတွက် မည်ကဲ့သို့စီမံပေးထားပါသနည်း။ ကျွန်တော် မြန်မာနိုင်ငံမှ မီးသတ်စနစ်များနှင့် မကျွမ်းဝင်သောကြောင့် ဤကိစ္စများကိုမသိပါ။
ယခု ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်သည် စနစ်ကျသော တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်လာရန် အားယူနေပါသည်။
ဤသို့အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျွန်တော်ဖြစ်စေလိုသည်မှာ အရာရာကို စနစ်တကျ၊ စံချိန်စံညွန်းများဖြင့် ပြုလုပ်စေ လိုသော ဆန္ဒဖြစ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး၊ မြို့ပြကာကွယ်ရေး (စင်ကာပူတွင် မီးသတ် ကို မြို့ပြကာကွယ်ရေး - Singapore Civil Defence Force ဟုခေါ်ပါသည်။) စသည်တို့တွင် စံချိန်စံညွှန်းများ မရှိသေးလျှင်လည်း နိုင်ငံတကာ စံနှုံးများကိုလေ့လာကာ စတင်ပြဌာန်းရန် အချိန်ကျနေပါပြီ။
စင်ကာပူတွင် ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေ စည်းကမ်းများမှာ အလွန်များပြား ထောင့်စေ့လှပါသည်။ လမ်းဘေးတွင်ရောင်းသော ဈေးသည်များကအစ ဥပဒေရှိ၏။ စားသောက်ဆိုင်များ၊ အများပြည်သူသုံးအိမ်သာ စသည်တို့အတွက် လိုက်နာရမည့် စံနှုံးများကို အသေးစိတ် ဖော်ပြထား၏။ လူနေအိမ်များကို မဆိုထားပါနှင့်။ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်၌ ယာယီသွယ်တန်း သည့် မီးစနစ်များမှအစ စံနှုံးသတ်မှတ်ချက်များရှိသည်။ သူတို့သတ်မှတ်ထားသော စံနှုံးများကို မလိုက်နာပါက ပေးဆောင် ရမည့် ဒါဏ်ငွေများကိုပါ တစ်ပါတည်း ပြဌာန်းထား၏။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာများအသင်းကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့များ၊ ၀န်ကြီးဌာနများ၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ဦးဆောင်ကာ -
- ရောင်းရေးဝယ်တာများ၌ အလေးချိန်ခွင်၊ တင်းတောင်းများကို တစ်နိုင်ငံလုံး စံနှုံးတစ်ခုတည်း ဖြစ်စေရန် စံသတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ သုံးနေသော အလေးချိန်ခွင်၊ တင်းတောင်းများသည် သတ်မှတ်ထားသော ဤစံနှုံးနှင့် ညီမညီ စစ်ဆေးသော အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းကာ စဉ်ဆက်မပြတ် အရေးယူ ဆောင်ရွက်စေခြင်း။ မလိုက်နာသူများကို ထိရောက်စွာ အရေးယူ အပြစ်ပေးခြင်း။
- အဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ရာတွင် ရေပေးသည့်စနစ်၊ မီးပေးသည့်စနစ်၊ မိလ္လာစနစ် မီးကာကွယ်ရေးစနစ် စသည်တို့ကို ဥပဒေဖြင့်ပြဌာန်းပေးခြင်း။ ဆောက်လုပ်ရာတွင် ဤဥပဒေများအတိုင်း လိုက်နာ၊ မလိုက်နာ စစ်ဆေးရန် အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ခန့်ထားပေးခြင်း။
- မြို့ပြ၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးလက်များတွင်လည်း ရေပေးဝေသည့်စနစ်၊ မီးပေးသည့်စနစ်၊ အမှိုက်သိမ်းသည့်စနစ်၊ မိလ္လာစနစ်များကို ဥပဒေဖြင့် သေသေချာချာပြဌာန်း လုပ်ဆောင်စေခြင်း။
စသည် စသည်တို့ကို သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များနှင့် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းကာ ဥပဒေ၊ စည်းကမ်း၊ နည်းလမ်းများ ပြဌာန်းလျှက် နိုင်ငံတော်ကို စနစ်တကျ ထူထောင်ကြစေလိုကြောင်း အကြံပြုရေးသားလိုက်ရပါသတည်း။
ဘလော့ဂ်ပေါ်တင်မယ်ဆိုရင်တော့ ရည်ညွှန်းထားတဲ့အချက်အလက်ကလေးတွေအတွက် footnote အနေနဲ့ ဒီလင့်ခ် ကလေးတွေပါထည့်ပေးပါခင်ဗျား။
၁. As World Millionaires Multiply, Singapore Holds Its Lead (http://www.businessweek.com//investor/content/jun2011/pi2011062_946842.htm)
၂. Electricity consumption by country ( https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2042rank.html )
၃. ရန်ကုန်မြေဈေး ( http://www.khitlunge.org.mm/news/news_detail.aspx?info_id=21970 ) နောက်ဆုံးပေါက်ဈေးသိလိုပါက ဈေးကွက်ဂျာနယ်တွင်ကြည့်ပါ။ ( http://www.zaygwet.com/estate_list.php )
၄. ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦးထုတ်ဝေသည့် ပြည်မြန်မာ ဂျာနယ်မှ ရန်ကုန်မြေအောက်မိုးပျံရထားလမ်းသတင်း( http://swesonemedia.org/index.php?id=1701 )
၂၉ - ၁၂ - ၂၀၁၁ ည နာရီပြန် တစ်ချက်တီးကျော်
Posted by အေးငြိမ်း at 8:07 PM
ဆရာ လို့ပဲ ခေါ်ပရစေ ဆရာ။ ဆရာ ရေးတဲ့ ဘလော့ တွေရော၊ စာအုပ်တွေပါ ကျွှန်တော်တို့တတွေ အား ပေး ဖတ်ရူ၊ သင်ယူပါတယ်ဆရာ ဆရာရဲ့ နောက်ထွက်မဲ့ စာအုပ် ကိုပါ စောင့် မျှော်လျှက်ပါဆရာ